SingForYou.net - thantthaepaing's Channel
thantthaepaing 's Channel
Last Login: 08-14-2015 14:54
ကျတော့်နာမည်သန့်သက်ပိုင်ခန့်ပါ...ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ပါ...သီချင်းဆိုလည်းဝါသနာပါ ပါတယ်...ပျော်တတ်တယ်...ခင်တတ်တယ်...စနောက်တတ်တယ်...ချစ်လည်းချစ်တတ်တယ်...အဟီ...ကျတော့်ဆီလာလည်သွားတဲ့ဝါသနာတူ ချစ်သူငယ်ချင်းများအားလုံး...သီချင်းးများသီဆိုရင်း ဘ၀အမောတွေ ဖြေဖျောက်နိုင်ပါစေဗျားး (^_^)/
Dob 06 Oct
aungtun1 on Jul 11, 2011
brother yay,, thank you so much for visiting my channel brother,,, i just listened your song in your youtube account,bro,, you've got really really great voice bro,, i like that song too,,,, youtube mhar comment yay lot ma ya lot ,dka pal,, comment yay thwer tal bro yay,,:))
NayYanThaw on Jan 23, 2011
အလည်ရောက်လာပါတယ.်.. သန့်သက်ပိုင်ခန့်ရေ...း))))
sithunaung on Dec 15, 2010
သဲညီရေအလည်လာသွားပါတယ် ..rnဦးရှီတူဆီလာလည်သွားတာမတွေ့လိုက်ရတော့...rnဘာမှတောင် မကျွေးလိုက်ရလို့..rnစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ :(..rnနောက်တစ်ခေါက်လာရင်ကျွေးမယ်ကွာနော် :))
susu23 on Dec 14, 2010
atan kg axo kg tae thar se ko Tlay susu alel lar par tal kwal...tachin myar myar xo par T layamyalarr pay nay par mal........:))))))))))
mrcastle on Dec 13, 2010
thz for ur kind support and u too haveareally sweet and cool vocal which really suits sweet pop songs . Believe me ...I'mafan and sing more bro ... u'rastar !!!
KoThurein on Dec 11, 2010
pyan lar lae dar bro yae...songs lae dwe lae, htet pi dot listen thwar thay dae...myar myar so oo naw...
panshwe on Dec 11, 2010
အားလုံးထဲမှာ "နှလုံးသားလေးထဲ မွေးဖွားရစေမှာ" ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အဲသီချင်းနားထောင်ပြီးrnကတည်းက လာရေးချင်နေတာ. အခုမှရောက်တော့တယ်။ ကိုသားငယ်လက်သစ်လေးကို အားပေးနေမယ်နော်.. have fun at sfy!!
susannyunn on Dec 11, 2010
ပြန်လာလည်ပါဒယ် :) ရည်မှန်းဂျက်တေ အောင်မြင်ပါစေ ....... ချင်းတေဆိုရင်းလဲပျော်ရွှင်ပါစေလို့.......... :pray :)))))))))))))))
forevermoe on Dec 10, 2010
ဘယ်သူများလဲလို့သားရယ် ကျဲမိုးဒီဇိုင်နာလေးပဲ...းP စောဒီးပါနော်ခုမှပဲလာ လည်ပြီးသီချင်းတွေနားထောင်သွားတယ်..ကောင်းမှကောင်းပဲး)ကျဲမိုးဆီလာလည်သွားတာလဲကျေးဇူးပါသားရေ..းPPP သီချင်းတွေများကြီးဆိုနိုင်ပါစေရှင်...း))
View All Recordings of thantthaepaing